जनतासँग माफी माग्दै किन रोए किम जोङ ? — Sanchar Kendra
जनतासँग माफी माग्दै किन रोए किम जोङ ?
काठमाडौँ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले आफ्ना नागरिकहरूको जीवनमा सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै माफी मागेका छन्। गत शनिबार भएको वर्कस पार्टीको ७५ औं वार्षिकोत्सवको सैनिक परेडमा भावुक हुँदै किमले आफ्ना सैनिकलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। सोही क्रममा उत्तर कोरियाली जनतासँग माफी मागेका थिए।
आँधीबेरीले पुर्याएको क्षति र कोरोना भाइरसको महामारी फैलिनबाट रोकेकोमा किमले कार्यक्रममा सहभागी हजारौं सैनिकलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए।
किम भावुक हुँदा आँशु पुछ्दै गरेको भिडिओ राज्यद्वारा सञ्चालित एक टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक भएको थियो। टेलिभिजनद्वारा सार्वजनिक भएको भिडिओमा कतिपय दर्शक समेत रोएको देखिन्छ। सैन्य परेडपछि किमले कोरोनाभाइरसको महामारी सकिएपछि दक्षिण कोरियाले आफूसँग फेरि हात मिलाउने बताएका थिए।
साथैउनले सोही दिन परेडमा नयाँ इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल, नयाँ मल्टिपल लन्च रकेट सिस्टम, छोटो दूरीको मिसाइल पनि सार्वजनिक गरेका थिए।
‘हाम्रा जनताको जीवनमा आइपरेका कठिनाइबाट मुक्त गराउन मेरो प्रयास र इमान्दारिता पर्याप्त भएको छैन’, उनले उक्त कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘यद्यपि हाम्रा जनताले सधैं विश्वास र पूर्ण भरोसा गरेका छन्, जे जस्तो भए पनि मेरो छनोट र संकल्पको समर्थन गरेका छन्।’ आणविक हतियार तथा ब्यालिस्टिक मिसाइलका कारण उत्तर कोरियासँग विभिन्न राष्ट्रले व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
तर अहिले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिनबाट जोगाउन उत्तर कोरियाले नै आफ्ना सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू बन्द गरेको छ। जसकारण उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्रमा थप असर परेको छ।
यस्तै अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि पहिलो पटक चुनाव र्याली गरेका छन् । एक दिन अघि मात्रै उनका डाक्टरले उनको कोरोना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको बताएका थिए ।
फ्लोरिडामा आयोजित उनको लगभग एक घण्टा लामो भाषणमा उत्साहित समर्थक सामू उनले भने, ‘ म अब शक्तिशाली महसुस गरिरहेको छ र र्यालीमा आएका हरेक व्यक्तिलाई चुम्न सक्छु किनभने अब म यो रोगबाट इम्युन भइसकेको छु ।’
उनले आफ्नो भाषणमा त्यहि कुरा गरे जुन उनले गर्दै आएका छन् । जस्तै उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडेनलाई बामपन्थी खेमाको पुत्ला बताए र मिडियालाई पक्षपाती बताए ।
प्रदेशको सेन्फर्ड शहरमा भएको र्यालीमा सामाजिक दुरीको कुनै पालना गरिएन न नै मानिसहरुले मास्क लगाएका थिए । ३ नोभेम्बरमा हुन लागेको चुनावमा अब तीन हप्ता मात्रै समय बाँकी छ । ट्रम्पका प्रतिद्वन्द्वी नो बाइडेन मतदान पूर्व सर्वेक्षणमा १० अंकले अघि बढिरहेका छन् । यद्यपि, केही महत्वपूर्ण प्रदेशमा यो अन्तर खासै धेरै छैन ।
डोनल्ड ट्रम्प ११ दिन अघि कोरोना संक्रमित पाइएका थिए जसका कारण उनलाई वाल्टर रिड मेडिकल सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो । तर गत आइतबार उनका नीजि डाक्टरले अब उनीबाट कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण हुने खतरा नभएको बताएका थिए ।
त्यसको एकदिन पछि अर्थात् सोमबार उनले ट्रम्पको सबै परीक्षण नेगेटिभ आएको बताएका थिए । यद्यपि, उनले ती परीक्षण कति दिनमा गरिएको थियो भन्ने जानकारी दिएनन् ।
फ्लोरिडामा आफ्नो भाषणमा कोरोना संक्रमणबाट निको भइसकेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘उनीहरुले भनिरहेका छन् कि म इम्युन हुँ । मलाई पनि म शक्तिशाली भइरहेको महसुस भइरहेको छ । म तपाईंहरुको बीचमा आएर जोसुकैलाई चुम्न सक्छु । म पुरुषलाई पनि चुम्नेछु र सुन्दर महिलालाई पनि । म तपाईंहरुलाई एउटा ठूलो मोटो चुम्बन दिनेछु ।’
डोनल्ड ट्रम्पले दुई अक्टोबरमा आफू र श्रीमती मेलानिया ट्रम्प कोरोनाद पोजेटिभ भएको जानकारी दिएका थिए । उनले आफैंले ट्वीट गरेर उनी आफ्नी श्रीमतीसहित क्वारेन्टिनमा बस्ने बताएका थिए ।
ट्रम्पले महामारी सुरु हुँदा पनि यो भाइरसलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । सुरुवाती समयमा उनी मास्क पनि लगाउँदैनथे । साथै उनी लकडाउन गर्ने पक्षमा पनि थिएनन् ।
तर फ्लोरिडाको र्यालीलाई हेर्दा यस्तो लाग्दैन कि संक्रमणपश्चात् उनको सोचमा परिवर्तन आएको छ । यसपछि पनि उनी अबको केही दिनमा पेन्सिल्वेनिया, आयोवा र नर्थ क्यारोलाइनामा पनि र्याली गर्ने तयारीमा छन् र त्यहाँ पनि सामाजिक दुरीलाई ध्यानमा राखिने कुरामा धेरैले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
ट्रम्पका प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको व्यवहारको निन्दा गरेका छन् । उनले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प आज स्यानफर्ड आए र पुनः गैरजिम्मेवारीयुक्त मानिसहरुलाई विभाजन गर्ने र मानिसहरुलाई तर्साउने कुरा गरेर गए ।’ बीबीसीबाट ।
एकाविहानै देशै हल्लिने गरी शक्तिशाली भूकम्प गयो, यस्ताे छ मानवीय क्षतिकाे विवरण